दाङमा गरिन १० बर्षकी बालिकाले आ’त्मह’त्या – Rapti Khabar
दाङ ६, भदौ, तुलसीपुरमा १० बर्षकी बालिकाले झु’ण्डीएर आ’त्मह’त्या गरेकी छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ दमारगाउँ निबासी नन्द राम केसीकी छोरी १० बर्षकी जानकी केसी घरको तलामा झु’ण्डीएर आ’त्मह’त्या गरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ ।
बालिकाको श’व पोष्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको श’व गृहमा राखिएको । बालिका शुक्रबार अपरान्ह साढे ४ बजे झु’ण्डीएको अवस्थामा देखेपछि परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
दाङमा डेढ लाख बढि नगद सहित ८ जना जुवाडे प’क्राउ
दाङमा डेढ लाख बढि नगद सहित ८ जना जुवाडे प’क्राउ परेका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका १० चारबगिया बस्ने कृष्ण केसीको कुखुरा फर्ममा जुवा खेलीरहेका आठ जनालाई नगद सहित प्रहरीले शुक्रवार बेलुकी साढे पाँच बजेतिर प’क्राउ गरेको पाँच नम्वर प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ ।
पक्राउ परेकाहरुका नाम खुलाईएको छैन । घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
दाङमा खोलाले मोटरसाइकल बगाउँदा दुई घाईते, मोटरसाईकल भेटिएन
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित बौलाहाखोलाले बगाउँदा मोटरसाईकल बगाउँदा दुई जना घाइते भएका छन् ।
बिहीबार बेलुका ७ बजेतिर खोलामा आएको बाढीले मोटरसाईकल बगाउँदा सवार दुईजना घाईते भएको प्रदेश नं. ५ प्रहरी कार्यालय दाङले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार चालक शान्तिनगर गाउँपालिका २ अमुवा निवासी २२ बर्षीय विकास बुढाथोकी र उनकी दिदी २६ बर्षीया लक्ष्मी बुढाथोकी घाईते भएका हुन् ।
लक्ष्मीको अबस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ । उनको उपचारकालागि कोहलपुर लगिएको छ । उनलाई खोलाले ३०० मिटर तल बगाएको थियो । मोटरसाइकल भने अझै फेला परेको छैन् ।